မယ်သံ: ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ် (Tag)
သမီးစံလေးရေ တက်ဂ်ထားတာ ကို သိတာနောက်ကျလို့ တင်တာနောက်ကျပေမဲ့လဲ ဒီရာသီ ဒီမုဒ်တွေ က ရှိနေတုန်းဘဲမို့ ကျေနပ်ပါ လို့ ။ (သတိတရ တက်ဂ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ညီမငယ်)
အရင်ဆုံး ခရစ်စမတ် ကာလ ပြီးသွားပြီး 2012 နှစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းခါနီး အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် သမီးစံလေးနှင့်အတူ ဘလော့ဂ်ဂါ များ ၊ဘလော့မရေးသော်လည်း ဒီဘလော့ဂ်လေး ကို လာဖတ်ကြသောဦးဦးဒေါ်ဒေါ်ညီအကိုမောင်နှမများ စိတ်ဧ။်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ဧ။်ကျန်းမာခြင်းများနှင့် ပြည့်စုံပြီး ကောင်းသော လိုအင်ဆန္ဒများလဲ ပြည့်စုံကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းရင်း နှူတ်ခွန်းဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင် ။ (အမ် အငြိမ့်မင်းသမီး ကျနေတာဘဲ)
ခရစ်စမတ် ကာလ မှာ မရိုးနိုင်တဲ့ Jingle Bells ဆိုတဲ့ ချစ်စရာ သီချင်းလေးပါ ။
သမီးစံ ရဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ကို ဖြေပါမယ်။
ပျော်ရွှင်ပါတယ် ။ စိတ်တော့ မလှူပ်ရှားပါ ။
မရှိပါ ။ အယင် ရုံးမှာတော့ ဘော့စ် က ခရစ်ယန် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ခရစ်စမတ်ကာလ ရောက်ရင် ရုံးမှာ အလှဆင်ရပါတယ် ။ ခရစ်စမတ် သစ်ပင်လေးရဲ့ အရွယ်အစားအလိုက် သူ့ အပေါ်မှာ လိုက်ဖက်မဲ့ လက်ဆောင်ထုပ်လေးတွေ တပ်ဆင်ရတာ တခြား ရောင်စုံခြူသီးလေးတွေ တပ်ဆင်ရတာ ပျော်စရာပါ ။
နှင်းတွေ အေးခဲနေတဲ့ နေရာ ကို သွားလည်ချင်ပါတယ် ။ တကယ်လို့ လက်ရှိနေထိုင်နေတာ က နှင်းတောထဲမှာ ဆိုရင်တော့ နှင်းမရှိတဲ့နေရာ ကို သွားလည်ဖြစ်မှာပါ ။ နှင်းကို မချစ်လို့ မဟုတ်ပါ ။ အားလပ်ရက်မှာ မိသားစု နှင့်အတူ နေရာဒေသ အညေ့ာင်းအလဲ လေးကို သွားလည်ချင်တာပါ ။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ခရစ်စမတ်ရာသီရယ်လို့ တကူးတက မပေးဖြစ်ပါဘူး ။ စလုံးမှာတော့ ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ခရစ်စယန် တွေ ကိုတော့ အမှတ်တယအဖြစ် မြန်မာဓလေ့ ချစ်စရာ ကျောက်ပန်းချီကား လေးတွေ ကိုရွေးချယ်ပေးဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ ။ သူတို့ ကလဲ အရမ်းဝမ်းသာကြပါတယ်။
မနှစ်က (2010) ခရစ်စမတ်မှာ ကိုယ်ဝန် ခုနစ်လ ရယ်၊ သမီးလေး အဖေ ရယ်၊ ကိုယ့် ရုံးတဖွဲ့ လုံး ရယ် ဘာလီ ကို ခရီးထွက်ခဲ့ ရတာ အရမ်းပျော်ပါတယ် ။ချစ်သူ ခင်သူ တွေ နဲ့ အတူ လှပသာယာ တဲ့ နေရာ ကို လည်ခဲ့ရတာပါ။
ဒီနှစ် (2011) ခရစ်စမတ်မှာတော့ ချစ်သူမပါ ခင်သူတွေနဲ့ ဟောင်ကောင် ကို ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ခရစ်စမတ်နေ့ တနေ့လုံး ဒစ်စနေးလန်းမှာ အချိန် ကုန်ခဲ့တာဆိုတော့ ကိုယ်အရမ်းချစ်တဲ့ အရုပ်ကလေးတွေ မြူးမြူးကြွကြွ ကတာ ကို ကြည့်ရတာ စိတ်လှူပ်ရှားရ သလို သမီးလေး ကို အရမ်းလွမ်းတဲ့ စိတ်နဲ့ မျက်ရည်ကျ ရပါတယ်။ ကိုယ့် ကို ကိုယ် သေချာ သိရတာကတော့ ဘယ်လောက် သာယာ လှပ ပါစေ ချစ်တဲ့ သူတွေ အတူမပါဘူးဆို မပျော်နိုင်တာ ကို ပါဘဲ ။
ချစ်တဲ့ သူတွေ နဲ့ပေါ့ ။ အထူးသဖြင့် သမီးလေး နဲ့ပါ ။
မြန်မာပြည်မှာတော့ မှတ်မိသလောက် 1995 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ 31 ရက်နေ့ ညမှာ စပြီး တီဗွီ က ည 12 နာ၇ီအထိ သီချင်းတွေ လွှင့်ပေးပြီး 12 နာ၇ီလဲ ထိုးရော ဆုတောင်းပြီး အိမ်ကြပါတယ် ။
စလုံး ရောက် ထဲက နှစ်စဉ် Marina Bay ကို သွားပြီး Count Down လုပ်ပါတယ်။
မီးပန်းတွေ ကိုကြည့်ပြီး HAPPY NEW YEAR လို့ အသံကုန် အော်ရတဲ့ အရသာ ကို သိပ်ကြိုက်တယ် ။ (ဒီနှစ်တော့ မသွားဖြစ်တော့ပါဘူး)
နှစ်သစ် ကို ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်မှ မသွားဘဲ မိသားစု စုံစုံလင်လင် နဲ့ အိမ်မှာ နေချင်ပါတယ် ။ သူတို့ စားချင်တာလေးတွေ စီစဉ်ပေးရင်းနဲ့ ပေါ့ ။ မနက်စောစောထပြီး ဘုရား ကို ပန်း ရေချမ်း ဆွမ်း နဲ့ သေသေချာချာ ပူဇော်ချင်ပါတယ် ။ အေးအေးဆေးဆေး ဘုရားဖူးရင်း ချစ်သူ ခင်သူ မုန်းသူ အားလုံးကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။
♥ နှစ်သစ်မှာ New Year Resolution အနေနဲ့ ဘာတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အကောင်အထည် ဖော် တတ် ပါ သ လဲ။
အထူးသဖြင့် ဘတ်ဂျတ်ပါ ။ ကိုယ်က ၀န်ထမ်းဘ၀ လစဉ် ရတာတွေ က သေချာ ပြီးသားမို့ တခြား အထူး ပိုကုန်စရာမရှိရင် ဘယ်လောက်စုနိုင်မယ်ပေါ့လေ။ သေချာ ဒိုင်ယာယီမှာ ကုန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်တွေ အတွက် ၀င်ငွေ ထွက်ငွေ (ပါစင်နယ် လူမှူရေး) ခွဲခြားစာရင်း လုပ်ပြီးတော့ ယောကျား ကို ပြ နှစ်ယောက်အတူ ဘယ်ဟာ ဘယ်လို ဆိုပြီးဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ် ။ အိမ်ထောင်သက် ခုနစ်နှစ်မှာ လုံးဝ မပျက်ကွက်ခဲ့ပါဘူး ။ သူနဲ့ အတူ ရှိမနေခဲ့ရင်တောင်မှ စာ၊ စာရင်း ကို သေချာ ရေးပေးပါတယ်။
မရှိပါဘူး ။ ပြီးသွားတဲ့ ဘယ်အရာ ကို မဆို ပြန် တွေးပြီးမခံစားတတ်ပါဘူး ။
(ဒါဟာနေရာ တိုင်းအတွက် မကောင်းပါဘူး ..တခါတလေ ပြီးသွားတာ ကို အဆင်မပြေ ခဲ့တာ ကို တနုံ့၂ နဲ့ ပြန် ပြီး ခံစားတတ်မှသာ သင်ခန်းစာ ပိုယူနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်)
♥ နှစ်သစ်ရောက်ရင် ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေတွေကို ပို့စ်စကဒ်များ၊ e-card များနှင့် နှုတ်ခွန်းဆက်တာမျိုး ရှိ ပါ သ လား။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်မှာတော့ တကူးတက လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ မလုပ်ဖြစ်ပါ ။ အချိန်မရတာ လဲပါပါတယ်။
2011 ဟာ ကျမ အတွက် ကံကောင်းတဲ့ နှစ်တနှစ်ပါ ။ သမီးလေးနဲ့ အတူ မနေရတာ ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ အစ်ိတ်အပိုင်းတွေ တော်တော်လေး ပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်။2012 မှာလဲ ဒီလိုဘဲ မိသားစုစုံစုံ ညီညီ နေရပြီး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် ကံကောင်းချင်ပါတယ်ရှင်။
အထူးသဖြင့် ဒီဘလော့လေး သက်ဝင်လာတဲ့ အတွက် မိတ်ဆွေ တွေ တိုးလာခဲ့ပါတယ်။
ကျမ ရဲ့ မသေမသပ် ဘလော့ဂ်လေး ကို လာဖတ်ကြတာ ကျေးဇူး အရမ်းတင်မိပါတယ်။
ဒီတော့ 2012 မှာ မိတ်ဆွေ များ အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဖြင့် ကံကောင်း ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်း ရင်း နှစ်သစ် ကို ကြို ဆိုကြပါစို့လားရှင်။
ကဲ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ရေးပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ ချစ်သမီးစံလေး ကျေနပ်ပါ လို့ ။
Posted by Thandar Lwin at Wednesday, December 28, 2011
san htun December 29, 2011 at 1:37 AM
ဟောင်ကောင်က ပြန်ရောက်ရင် ပို့ စ်တွေ ထပ်တင်ပါဦး ..Merry Christmas & Happy New Year
မဒမ်ကိုး December 29, 2011 at 8:52 AM
ဒိုးကန်လဲအဲလိုလုပ်ရမယ် ကိုယ့်အမတွေဆီက အတုခိုးရမယ်
ခုတော့ အဲစာအုပ်ကိုမကြည့်ချင်တာသွေးတက်လို့း)
သမီးစံ December 29, 2011 at 9:05 PM
Happy New Year ပါ အစ်မသံး)
theint January 2, 2012 at 12:44 AM
Dear Thandar,(ဘယ်လောက် သာယာ လှပ ပါစေ ချစ်တဲ့ သူတွေ အတူမပါဘူးဆို မပျော်နိုင်တာ) me too.During school holidays my son went back MM only one month, i missed him everyday. I understand ur feeling...Pray for u to be family reunion very soon..Happy new year Friend!
ရှင်ပင် မဟာလာဘ မံဘုရားကြီး (စလေ)
ယုံကြည်မှူတည်ဆောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပါမောက္ခဒေါက်တာေ...
သမီးလေး ဖေဖေ အတွက်
ပြဿဒ်လှ ဘုရား နှင့် ဆင်ခေါင်း ဘုရား